China 12-16 Makore Yakareba Sleeve Mukomana T-Shirt PY-TC003 Kugadzira uye Fekitori | Pinyang
12-16 Makore Yakareba Sleeve Mukomana T-Shirt PY-TC003
Makore gumi nemaviri kusvika gumi nematanhatu akareba sleeve mukomana T-shirt
1. Ndeupi T-shati wakakodzera vakomana vadiki?
Kune vana, zvipfeko zvemavara akasiyana siyana zvakavakodzera kwazvo - kupenya kwezuva uye runako ndizvo zvakajairwa zvinhu zvevana. Isu tese tinofarira mhepo isina mhaka uye ine rudo yevana, saka vana havasarudze ruvara rwehembe. Kana ivo vari "wenguva dzose" mune rimwe vara ivo vachiri vadiki, ivo vacharasikirwa neyakajeka yavo kurota. Vanoda T-shati inoshamwaridzika yeganda uye ine fashoni, ichi chigadzirwa chemachira chakachena jira rekotoni, vana vanowanzodikitira kana vachitamba, zvino yakachena donje ndiyo yakanakisa ziya rinotora jira, vana vanopfeka vakasununguka uye vasingadzoreke.
2, Ndezvipi zvakanakira mitsetse T-shirts?
T-shati chena yakapusa uye inochinjika, iri nyore kuenderana nemhando dzakasiyana dzehembe, zviri nyore kupenya, saka muzhizha inozivikanwa kwazvo nevakomana vadiki naamai. Semuenzaniso, iyi chena T-shati iri nyore uye isina kujairika, ine inonakidza kumedza pateni dhizaini parutivi, izvo zvinoita kuti iyo T-shati yese ive inochinjika, yakapusa uye yefashoni.
Iyi t-shirt chena ine dhizaini isina kufanira parutivi. Iyo trapezoidal yekucheka dhizaini inoita kuti iyo yese T-shati iite seyakasiyana zvakanyanya uye inoshamisira. Iyi yakapusa uye yakasarudzika T-shati inogona kuratidza zviri nyore hunhu hwefashoni hwevana muzhizha.
Muchena mitsetse T-shati, chena T-shati ine yakasarudzika mitsara pateni dhizaini, uyezve neinonakidza dhizaini, yakadaro T-shati pane yakapfava chena T-shati iri yakati wandei inoyevedza uye yehunyanzvi kuravira, fashoni uye yakanakisa.
Chigadzirwa chinoshandiswa: yezvipfeko zveboka, zvakasarudzika, nezvimwewo, zvinogona kugadzirisa ruvara, pateni, logo.
Mubvunzo: Uri Mugadziri kana kambani yekutengesa?
A: Isu tiri vekutanga vagadziri uye vatengesi vatengesi vane makore mashanu echiitiko.
Mubvunzo: Ndezvipi zvigadzirwa zvako zvikuru?
A: Isu tiri nyanzvi yekugadzira zvipfeko zvekuruka zvevana, zvigadzirwa zvedu zvikuru maT-shirts, mabhurugwa, zvikabudura, masutu, masiketi, majaketi, s uye masutu evacheche evana vane makore 0 ~ 10.
Mubvunzo: Ndeupi mhando yezvigadzirwa zvako?
A: Isu takagamuchira mhando yakanaka uye Eco-inoshamwaridzika machira, anofema uye akasununguka, zvakanaka kune ganda revana .Zvigadzirwa zvedu zvakapfuura iyo SGS nguo bvunzo.
Mubvunzo: Sei mitengo yako iri pasi pane vamwe vatengesi?
A: Ndokumbira utarise kuti isu tiri vekutanga vagadziri uye vatengesi vekutengesa, saka mitengo yedu yakaderera.
Zvigadzirwa zvedu zvakafanana zvehunhu nemutengo wakaderera, mutengo mumwe chete nehunako.
Q: Ndinogona kuva Logo yangu zvigadzirwa?
A: Ehe, iwe unogona kuve newe logo pane zvigadzirwa. Iyo MOQ ndeye 50pcs / dhizaini. ndapota taura nesu kana tsika tsika.
A: Kana vakahodha iwo marongero azvino, vakagadzirira kutumira .parcels inotumirwa kunze mukati memazuva manomwe mushure mekubhadharwa risiti .Nguva yekutumira inoenderana nenyika yauri kuenda
Kana iri tsika sevhisi, yakatarwa nguva yekuendesa inoenderana nezvinhu uye huwandu hweodha yako.
Mubvunzo: Ungagadzirisa sei matambudziko emhando yepamusoro mushure mekutengesa?
A: Tora mifananidzo yematambudziko uye utumire kwatiri. Tichaita mhinduro inogutsikana kwauri mukati maawa makumi maviri nemana mushure mekusimbisa matambudziko.
Pashure: Vachena Vacheche Track Suits PY-YR002
Zvadaro: Yakagadziriswa Mapatani Akareba Sleeve Mukomana T-Shirt PY-TC001
100% Cotton Pfupi Sleeve Mukomana T-Shirt PY-TD002
Crew Neck Pfupi Sleeve Mukomana T-Shirt PY-TD001
Chitubu Uye Kudonha Yakareba Sleeve Mukomana T-Shirt PY-TC002
Kupisa Tengesa Yakareba Sleeve Mukomana T-Shirt PY-TC004
Customizable Mapatani Yakareba Sleeve Mukomana T-Shirt P ...